महाव्याधि र विपदमा पनि कुर्सीकै झल्को ! : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारमहाव्याधि र विपदमा पनि कुर्सीकै झल्को !
देश झन्डै ढेड वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित छ । नागरिक प्रताडित छन् भने ८ हजार ५ सय बढी मृत्यु वरण गर्न बाध्य भइसकेका छन् । अकल्पनीय पीडा भोग्नुपरिरहेको छ नागरिकले । केटाकेटी, युवायुवती तथा वृद्धवृद्धाहरू सबै जना कहाँ कतिखेर मृत्युको मुखमा पर्न सक्ने भयले त्रसित र आतंकित छन् । यस्तै, महामारीको समयमा फेरि मनसुन प्रवेशसँगै परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो आउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने क्रम समेत बढेको छ ।
सरकार जनताको मुख्य अभिभावक हो भने मुलुकमा रहेका राजनीतिक दल पनि जनताको अभिभावककै रूपमा रहन्छन् । यदि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र नैतिकवान छन् भने उनीहरूको मुख्य केन्द्रबिन्दु नै देश र जनता हुने गर्छ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने दल र नेताहरू मात्रै सफल हुन्छन् र जनताको मन मष्तिष्कमा राज जमाउन सक्छन् । तर हामीकहाँ पछिल्लो समय त्यस प्रकारका राजनेताको खडेरी पर्दै आइरहेको छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति जनताको आशा र भरोसा मर्दै जान थालेको छ ।
अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो वेभले मुलुकमा अकल्पनीय क्षति गराइरहेको छ । मानिसहरू दैनिक रूपमा नै मर्न विवश भइरहेका छन् । कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा पनि हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र भावी दिनमा आउन सक्ने संकट समाधान गर्न त्यति संवेदनशील देखिन सकेनन् । प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सत्ताको फोहोरी खेलमा नै निर्लिप्त हुन पुगे र अहिले पनि त्यस्तै फोहोरी खेल जारी छ ।
पछिल्लो समय आएको वाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहँु, रुपन्देही, नवलपरासी, कास्कीलगायतका दर्जनांै जिल्लाहरू नराम्ररी प्रभावित छन् । विगतका तथ्यांक हेर्दा पनि बाढीपहिरोबाट बर्सेनि ५ देखि ६ सय व्यक्तिको मृत्यु हँुदै आइरहेको छ । पहाड र तराईका विकट गाउँबस्तीमा बस्ने जनता बाढीपहिरोको चपेटामा परी अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । केही अपवाद छोडेर बाढी पहिरोले गरिब र विपन्न नागरिकमाथि नै बढी आक्रमण गरिरहेको छ । विपन्न नागरिकले पक्की घर बनाउन सक्दैनन् । कच्ची माटाका घर कमजोर हुने भएकाले बाढी पहिरोमा त्यस्ता घर सजिलैसँग बग्ने र त्यहाँ बस्दै आइरहेका मानिस मर्ने क्रम बढी देखिन्छ । यसले गर्दा पनि वर्षाको समय कतिपय गरिब विपन्नको लागि कालजस्तै बनेर आउने गरेको छ । हाम्रो जस्तो सामन्तवादी प्रवृत्ति मौलाएको देशमा गरिब विपन्न चौतर्फी समस्याको जाँतोमा पिसिन बाध्य हुँदै आइरहेका छन् । रोग, भोक, अभाव, विपन्नता, विपद्ले एकैपटक प्रहार गर्दा उनीहरू थला पर्दै आइरहेका छन् ।
विडम्बना अहिले पनि मुलुकमा महामारीको व्याधि तथा बाढी पहिरोको कुनै त्रास र असर नभए जसरी नेताहरू एकले अर्कालाई सिध्याउनेगरी कालो कोठरीमा बसेर भयानक षड्यन्त्र बुन्नमा व्यस्त देखिन्छन् । जनताको कुनै मतलव नराखी त्यस्ता षड्यन्त्रमा व्यस्त नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले जमानत जफत गराएर राजनीतिक रूपमा सन्यासी बनाइदिनुपर्छ
यस्तै अवस्थामा हो सरकार र राजनीतिक दलले त्यस्ता जनताको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउने । तर, हामीकहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको मिनेट मिनेटको कुर्सी र जुगा लडाइँका कारण जनताले दुःख पाइरहेका छन् । ढेड वर्षदेखि कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहँदा नागरिकले आफ्ना नेताहरू नियमित रूपमा घरदैलोमा आएर आफ्नो सुखदुःखको सारथी हुन सकून् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । तर, केन्द्रमा सत्ता र कुर्सीको लडाइँमा कुकुर बिरालो जसरी नै ‘ङ्यारङ्यार र ङुरङुर’ गर्ने नेताहरूलाई जनताको समस्या र पीडाबारे के मतलब ? यस्तो महासंकटको समयमा नेताहरू आफैं झगडा गरेर आफ्नो राजनीतिक हैसियत सामाप्तिको बाटोतर्फ लैजान अग्रसर छन् ।
अहिले पनि बाढी पहिरोले कैयांै पहाडी जिल्लाका गाउँबस्ती रोइरहेको छ । कैयांै आफन्त गुमाउन विवश छन् । कैयांै व्यक्ति बेपत्ता छन् । हुन त बाढीपहिरो एक किसिमको विपद् हो । यो आकस्मिक रूपमा नै आउने गर्छ । तर पनि सरकारले विपद् आउनुअघिको पूर्वतयारी र विपद् भइसकेपछि गर्नुपर्ने उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको सो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना नेता तथा भ्रातृसंगठनलाई विपद्का बेलामा जनताको घरदैलोमा पठाएर उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कुर्सी दौडमा लागिरहेका नेताहरूले बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिबारे विज्ञप्ति निकालेर समावेदना दिँदैमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा त नेताहरू प्रभावित गाउँबस्तीका पीडित जनताको साथी बन्न गाउँगाउँमा नै पुग्नुपर्नेहुन्छ । आलीशान महलमा बसेर सत्ताको लडाइँमा व्यस्त वैगुनी नेताहरूलाई यसबारेमा के मतलब ?
महामारी र बाढी पहिरोजस्तो महासंकटको समयमा सबै दलहरू मिलेर राट्रिय एकता र सद्भावको सन्देश दिनुपर्ने हो । सत्तारूढ दल एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसका लागि विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिए पनि यस्तो महाव्याधि र विपद्सँग जुध्न उनले राष्ट्रिय सहमति कायम गराउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि सरकार नै परिवर्तन गर्ने फोहोरी खेलमा रमाउँदै आएका अन्य दल र तिनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई खुलेर सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेताहरू आफ्नो घरदैलोमा आएर सान्त्वना दिएको र सहयोग गरेको हेर्न आमजनता आतुर छन् । तर, जनताको मनोविज्ञान बुझ्न असफल हँुदै आएका हाम्रा नेताहरू कुर्सीकै खेलमा मस्त छन् । यो आमनेपाली जनता र सिंगो मुलुकका लागि निकै दुःखदायी अवस्था हो । निर्वाचन ताका जनताको घरदैलोमा पुगेका नेताहरू त्यसपछि केही अपवादलाई छोडेर जनताको घरदैलोमा जानै छोडेका छन् । अहिले त झन् नेताहरूको एउटै मात्रै ध्याउन्न सत्ता र कुर्सी मात्रै बन्न पुगेको छ । सरकारले पनि जनताको मन जितेर काम गर्न नसकेको यथार्थ हो तर आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेकै छ । तर, सत्तारूढ दल एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर सरकारलाई सुरुदेखि नै काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्दै आइरहेको जगजाहेर नै छ । त्यो पक्ष अहिले पनि जसरी हुन्छ सरकारलाई ढाल्ने खेलेमा नै उद्दत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले त सत्तापक्ष तथा सरकारले जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि विरोध गर्नु उसको धर्म नै हुने गरेको छ । असल लोकतान्त्रिक संस्कारमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो नै भनिन्छ ।
हाम्रा कतिपय सरकारी निकाय कर्मकाण्डीमा मात्रै सीमित छन् । आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम राम्रो परिणाम दिनेगरी सम्पन्न गर्न अधिकांश सरकारी निकाय असफल रहँदै आएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश निकायले काम र परिणामलाई पनि औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । राम्रा नेता नपाएका नेपाली नागरिकले कर्मचारीहरू पनि काबिल र राम्रा पाउन सकेका छैनन् ।
तर, हामीकहाँ असल लोकतान्त्रिक संस्कार भएका नेता र दलहरू भेटाउनै मुस्किल हुँदै आइरहेको छ । नेताहरूमा हुर्कंदै गएको घातक विषका रूपमा रहेको प्रवृत्तिअनुसार एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्र्ने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र सिध्याउने गलत प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । नेताहरूमा विकास भएका यस्ता प्रवृत्ति अन्त नहुने हो भने हाम्रो शासनप्रणालीमा गम्भीर समस्या आउन सक्छन् र नागरिकले अझै दुःख पाइरहने छन् । त्यसैले नेताहरू सच्चिन जरुरी छ । अहिले सबै नेताहरूको एउटै दृष्टि कसरी हुन्छ कोरोना महामारी र हालको बाढी पहिरोसँग जुधेर नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने तथा क्षति भएको ठाउँमा राहत र पुनःस्र्थापनाका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा पु¥याउनुपर्ने समय हो । तर, विडम्बना अहिले पनि मुलुकमा महामारीको व्याधि तथा बाढी पहिरोको कुनै त्रास नभए जसरी नेताहरू एकले अर्कालाई सिध्याउने गरी कालो कोठरीमा बसेर भयानक षड्यन्त्र बुन्नमा व्यस्त देखिन्छन् । जनताको कुनै मतलव नराखी त्यस्ता षड्यन्त्रमा व्यस्त नेतालाई आगामी निर्वाचनमा जनताले जमानत जफत गराएर राजनीतिक रूपमा सन्यास लिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
बर्सेनि मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरो आउँछ र त्यसले मानवीय र भौतिक क्षति गराउँछ भन्ने प्रायः सबैलाई थाहा छ । त्यसैले त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर नागरिकहरू पनि आफैं जागृत हुनुपर्छ । सरकारले पनि त्यस्तो जोखिमयुक्त बस्तीको समयमा नै पहिचान गरी त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । आफ्ना नागरिकलाई सबै प्रकारका जोखिम र असुरक्षाबाट बचाउने प्रमुख दायित्व राज्य र सरकारको हो ।
हाम्रा कतिपय सरकारी निकाय कर्मकाण्डीमा मात्रै सीमित छन् । आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम राम्रो परिणाम दिनेगरी सम्पन्न गर्न अधिकांश सरकारी निकाय असफल छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश निकायले काम र परिणामलाई पनि औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरेका छन् । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । राम्रा नेताहरू नपाएका नेपाली नागरिकले कर्मचारी पनि काबिल र राम्रा पाउन सकेका छैनन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार दैवी प्रकोप र विपद् व्यवस्थापनमा मात्रै विगत ७ वर्षमा २५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि विपद्का नाममा बर्सेनि करोडांै रुपैयाँ खर्चने गरेका छन् । गैससले गर्ने खर्चबारे सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक छैन । गृहले विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न जिल्लामा खुद्रे रकम पठाउने गर्छ र रेडिमेट कार्यक्रम तय गरिन्छन् । बाढीपहिरोको अत्यधिक जोखिम कहाँ छ ? त्यसको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम कम गर्नेगरी पूर्व तयारीस्वरूप विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निकै राम्रो हुन्थ्यो । तर, सरकारी निकायसँग यस्तो जोसजाँगर र उत्साह छैन । उसले त क्षति नै नहुने जिल्लामा पनि विपद् व्यवस्थापनका नाममा रकम पठाउँछ । कतिपय जिल्लामा सो रकमको खासै सदुपयोगसमेत हुँदैन । गृहले आगामी दिनमा यसलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
भनिन्छ, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिन उचित हुन्छ । त्यसैले बाढीपहिरो गएर ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुने अवस्था आउनुभन्दा बाढी पहिरो जाने स्थिति र अवस्थालाई नै न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष र प्रभावकारी अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो महाव्याधि र विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर नागरिकको सुरक्षा, उद्धार र राहतमा खट्नुपर्छ । यो महासंकटमा सबै प्रकारका कुर्सी खेल र काला षड्यन्त्र बन्द गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्कर्मद्वारा राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
एक वर्षमा ५० अर्ब ७८ करोडको चामल आयात
काठमाडौँ । विहे ब्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्दा देखासिकीकै लागि भएपनि सामान्य व्यक्तिले पनि ऋण गरेरै पार्टी प्यालेसमा भोज भतेर गर्ने संस्कार बढेको छ ।...
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को डेल्टा प्रजातिको अर्को नयाँ भाइरस भेटिएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षण गरिएका ४७ नमुनामा...
प्रधानमन्त्रीको कदम भर्तसनायोग्य : बामदेब गौतम
काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्नेे कदम गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत विज्ञप्ती...
सजिलाे छैन उपत्यका छिर्न, नाकामा अनुगमन गर्दै नगरपालिका
काठमाडौँ । बिहीबार महालक्ष्मी नगरपालिकाले सिद्धिपुरस्थित तीन घरमा तालाबन्दी ग-यो । उपत्यका बाहिरको कोरोना सङ्क्रमित जिल्लाबाट आएकालाई नगरपालिकासँगको समन्वयमा प्रहरीले ती घरमा तालाबन्दी गरेको...